सूचना प्रबिधि Archives - Khabar Samachar
Home / सूचना प्रबिधि
2 days ago	65
जब रक्सी भित्र छिर्छ, नेपालीहरुको अंग्रेजी बाहिर आउँछ’ भन्ने भनाइ हामी सबैले सुनेका छौं। कतिपय अवस्थामा अलि-अलि अंग्रेजी बोल्न जानेको मान्छे नसामा धाराप्रवाह बोलेको सुनेका पनि छौं। हामी ठान्छौं, रक्सीको सुरमा अंग्रेजी बोल्ने वा बोल्न खोज्ने मान्छेले नाटक गरेका हुन्। के साँच्चै नाटक गरेका हुन्? वा, यसरी अंग्रेजी बोल्नुको पछाडि …
2 days ago	320
मोबाइल फोन ह्याङ हुने तथा स्लो चल्ने कयौं कारणले हुन सक्छ । तर, यसको एक प्रमुख कारण स्टोरेज फुल हुनु हो । हामी आफ्नै केही गल्तीका कारणफोनको स्टोरेज फुल हुन्छ । यी गल्ती के हुन् र कसरी गल्तीबाट बँच्ने भन्ने ज्ञान हुुँदा समस्याबाट मुक्ति मिल्छ : १. इंस्टाग्राम राखेको फोटो …
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौंँ एवम् अन्तिम दिन शनिबार भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परानुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई मनाइँयो । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइबाट पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । लक्ष्मीपूजाका दिन स्थापित दियो, कलश र गणेशको …
3 days ago	186
तपाईको मोबाइलमा सेभ नभएको वा नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन कसले गरेको हो भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने एप्स नेपाली बजारमा आएको छ । तपाइँको मोबाइलमा घण्टी बज्नासाथ कसले फोन गरेको हो भन्ने कुरा सहजै पत्ता लाग्छ । नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएको यो एप्स नेपाली बजारमा पहिलो हो । नेपाली बजारमा पनि …
3 days ago	116
समुन्द्रशास्त्रमा लेखिएको छ की तलका गुणहरु भएका कन्यासँग संगत गर्ने पुरुष असाध्यै भाग्यमानी हुन्छ । यस्ता कन्या विवाहपछि घर भित्रिँदा हरेक पुरुषको भाग्य खुल्छ र घरमा लक्ष्मीको बास हुने यो शास्त्रमा लेखिएको छ । – कान तथा ओठमा कोठी छ भने त्यस्ता कन्या भाग्यामानी र सुशिल हुन्छन् । – पैतालाको …
3 days ago	89
हानै गाउँमा हल्ला फैलिन्छ फलानो त मरेछ। छरछिमेकिहरु भेला हुन्छन् । रुदारुदै बेहोस भएकी मेरि आमालाई सम्हाल्ने प्रयास गर्छ्न केहि महिलाहरु। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफुलाई अनि पुरै परिवारलाई सम्हाल्न सक्ने मेरो बुबा आज आफुलाई सम्हाल्न नसकेर मेरो लासलाई हेर्दै बरबर आँसु झार्नुहुन्छ। गलत बाटोमा लाग्ला भनेर आफ्नो भन्दा मेरो धेरै …
3 days ago	245
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । तिहारलाइ पवित्र चाडका रुपमा लिने गरिन्छ । अझ त्यसमापनि भैलो खेल्ने रात त लक्ष्मी पूजा पर्ने गर्छ । यो दिन धनधान्यकि देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने गरिन्छ । पवित्र भएर पूजा गरिने यो रातमा कतिपय त रातभर भजन गाउँदै जागानै बस्ने गर्छन् । यहि रात भैलो खेल्ने …
आज राति उल्का वर्षा हुने, शनिबार बिहानसम्म देखिने
4 days ago	18
काठमाडौँ। हेलीको पुछ्रेताराका कारण हुने मृघशिरा उल्का वर्षा आज रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म देखिने भएको छ । उल्का वर्षाको स्रोत ओरायन (मृघशिरा) तारामण्डलमा भएको जस्तो देखिने हुनाले यसलाई ओरिअनिड मिटियर सावर वा मृघशिरा उल्का वर्षा नाम दिइएको छ । उल्का वर्षाको समय कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा भएकाले आज राति हेर्न सकिनेछ । …
२६ वर्षको उमेरमा झन्डै अर्ब कमाउनुभयो, अबको २६ वर्षमा खर्बपति हुने देखियो नि ?”
5 days ago	56
जोन खड्का, युवा व्यवसायी जोन जम्माजम्मी २६ वर्ष पुगे । उनको उमेरका युवाहरू अहिले पनि कलेजको अध्ययन एवं डेटिङमा समय बिताइरहेका छन् । जोनले भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी भएर करोडौं रुपैयाँ कमाइसकेका छन् । माग्दीका सामान्य जागिरे बुवाका छोरा जोन २०६३ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेर काठमाडौं आएका हुन् । आफ्नो पढाइ …
बुहारीलाई हातपात गरेको देखेपछि श्रीमतीले टाऊकोमा लौरो बर्साउदा श्रीमान ठाऊको-ठाऊ ठहरै…
5 days ago	211
चरीकोट, १० भदौ । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पुमा श्रीमतीले प्रहार गरेको लौरोबाट श्रीमान्को घटनास्थलमै ज्यान गएको आरोप लगाइएको छ । ज्यान गुमाउनेमा मेलुङ गाउँपालिका–७ भेड्पुका ८३ वर्षीय कर्णबहादुर तामाङ छन् । उनलाई श्रीमती सञ्जीले लाठी प्रहार गरेको जिप्रका दोलखाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीका …